चीन एक्रिलिक शीट प्रदायक - जंघाई एक्रिलिक
निकासी र जहाजमा उपलब्ध एक्रेलिक पानाहरू निकालियो र जहाज तयार पार्नुहोस्। थोक मूल्यहरूमा अर्डर गर्नुहोस्।
टिकाऊ र अनुकूलन, Yuejing एक्रिलिक एक्वैरियम 'स्पष्ट र रंगीन एक्रिलिक शीटहरूको विस्तृत चयन ग्लासको प्रभाव प्रतिरोध लगभग 17 पटक छ। सजिलै मस्यौदायोग्य, तिनीहरू हात, ज्वाला, वा मेशिन पोलिश, बांड राम्रोसँग हुन सक्छ, चमकदार गिलास जस्तै उपस्थिति छ, मुद्रणका लागि उपयुक्त छन् र लागत प्रभावी बनाम ग्लास वा पालो कार्बननेट। स्पष्ट, कालो, सेतो, बुलेट-प्रतिरोधी, दर्पण, गैर-चमक, म्याट समाप्त, यूभी फिल्टरिंग, वा डिलिमेटेड (फ्रस्ट गरिएको) ऐक्रेलिक पानाहरू उपलब्ध छन्।
ऐक्रेलिक पानाहरु लाई पनि "plexiglass" या "Plexiglas" भनिन्छ, कांच को शीट को लागि अक्सर एक विकल्प को रूप मा प्रयोग गरिन्छ। Plexiglass पानाहरूले गिलासमा समान पारदर्शिता प्रदान गर्दछ, तर तिनीहरू अधिक टिकाऊ र अपेक्षाकृत छिटो-प्रमाण हुन्।
एक्क्रेलिक पानालाई सञ्झ्याल प्यानहरू बदल्न को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ, सतहहरु को रक्षा गर्न वा सामानहरु लाई पनि ठुलो रूपमा राख्नुहोस्। चूंकि पेप्क्सिगोल सामान्यतया पूर्वनिर्धारित आकारहरूमा बेचेको छ, सबै चीजलाई विचार गर्नुहोस् जुन तपाईंले यो सामग्री प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई आवश्यक रकम खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग पानामा पानाहरूको आकार सधैँ काट्न सक्दछ।
एक्रिलिक एक्स्ट्रोड गरिएको पाना के हो?
रगतको आधा वजन भन्दा कम प्रतिरोधी असर, एक्रिलिक एक्क्रेलिक पानाहरू एक बलियो, आर्थिक समाधान हुन्। सिद्ध अनुप्रयोगहरूले सिगेज, स्पेस, स्काइट्स र ग्लेजिंग समावेश गर्दछ। मोटाईमा कम भिन्नताका लागि एक्सट्रुजन निर्माण खाताहरू। बाहिर निकाल्दा plexiglass पानाहरू बनाउन र आकार गर्न सजिलो बनाउँछ। गिलासको तुलनामा अधिक लचीलोपनको कारण, एक्रिलिक एक सुरक्षित अनुप्रयोग हो जहाँ सुरक्षा समस्या छ।
एक्रिलिक कास्ट सफा पाना के हो?
कास्ट एक्रेलिक पानाहरू हल्का वजन, विभिन्न प्रकारका र मोटाईहरूमा उपलब्ध छन्, र बाहिर निकालेको फारम भन्दा बढी थर्मल स्थिरता सुविधाहरू। दुई को, ऐक्रेलिक कोस्ट को अधिक ओप्टिकल स्पष्टता छ। यो एकदम कठिन छ यस फारममा बाहिर निकाल्दा समग्र। उत्कीर्ण हुँदा, फस्टर्ड उपस्थितिमा ऐक्रेलिक नतिजा राख्नुहोस्, जस्तै बाहिर निकालेको च्यादरमा स्पष्ट उत्कीर्णन को लागी। कास्ट ऐक्रेलिकका लागि सामान्य अनुप्रयोगहरू पोइन्ट-को-खरीद (POP) र भण्डार प्रदर्शन, स्किलिङ्ग, फ्रान्सेली, तस्विर फ्रेमहरू, एयरोस्पेस उद्योगका लागि उत्पादहरू समावेश गर्दछ, र यसको उर्जाको उतार-चढ़ावको कारणले गर्दा बर्फ राइक्सहरू छन्।
पारदर्शी स्पष्ट एक्रिलिक शीट मोटो प्लास्टिक पर्खाल प्यानल
क्रिस्टल एक्रिलिक पाना फ्लैट प्लास्टिक मोटो पाना
एकैछिनमा उनीहरुसँग भेट्न खोजे
उच्च गुणवत्ता ठूलो ऐक्रेलिक घुमावदार मछलीघर भव्य ग्लास पाना पैनलों
माछा टैंक एक्वैरियमहरूको लागि ऐना ऐक्रेलिक घुमाइएको प्लास्टिक पाना
1 इन्च एक्रिलिक गिलास शीट plexi ग्लास मोटो प्लास्टिक ग्रीनहाउस कवर को लागि pmma पाना
समुद्री एक्वैरियम को लागि घुमावदार लुकाइट ऐक्रेलिक plexi गिलास प्लेट
80mm स्पष्ट मोटी ऐक्रेलिक शीट पैनल
50mm 40 मिमी मोटी plexi गिलास शीट एक्रिलिक